Londoloza Ezinye Euro Futhi Thatha Isitimela Futhi Izikhangibavakashi Europe | Londoloza Isitimela
Ikhaya > Izikhangibavakashi Europe > Londoloza Ezinye Euro Futhi Thatha Isitimela Futhi Izikhangibavakashi Europe
Kuleminyaka 10 iminyaka, izigidi sesizicabangile yeka indlela okuzuzisa ngayo ukuthatha isitimela! Amasimu Rich zasemazweni, izindawo ezisogwini olucwebezelayo, nentaba ehlanzekile zamakhorali azikaze zikhulunywe kuzincwajana noma amabhulogi wokuvakasha. Ukuthatha isitimela kuyinto fun, elula, kanye nendlela enobungani besikhwama yokuthola ukusuka endaweni engu-A kuye ekhoneni B, ngakho ungacabangi kabili, uthatha isitimela!
Into yesibili enkulu ngezitimela eYurophu futhi ngokuvamile yindlela isabelomali-friendly bangaba. Akukona nje kuphela ukuthi kukhona abaningi kangaka izindawo ezishibhile ongakhetha kuzo, kodwa futhi ngezindlela eziningi ukuze unciphise jikelele zohambo. Ngakho-ke uma ngabomvu ukubabona ukuthi hit ngesinye ujantshi ngokushesha, nawa amathiphu ambalwa enkulu ukusebenzisa:
Thatha Abanye Isikhathi Sokwenza le Ucwaningo Nokuhlela ngaphambi uthatha isitimela
Ezimweni eziningi uma uthatha isitimela, ungenza okuhle kwe-ithikithi lakho(s) nge yokusesha ngokushesha inthanethi. Ukubhuka ithikithi lakho kusengaphambili uma kungenzeka. Hlola ukuthi isikhathi sonyaka amanani ithikithi kukhona aphansi, futhi uqiniseke ukuthi aqaphe labo izaphulelo. ngokuvamile, wonke amazwe kuyodingeka uhlobo oluthile inketho eshibhile etholakalayo ithikithi lokuthenga. Ngakho, ukwenza ucwaningo lwakho! Funda ngokusebenzisa le ibhulogi ukuba bajwayelane izindlela ezihlukene.
Montpellier ukuze Toulouse Izitimela
Marseille ukuba Toulouse Izitimela
Lapho wena Thatha zemininingwane, Izikhangibavakashi Ebusuku
Noma ngabe umfundi othanda ukuhamba noma isihambi esivamile esihamba ngesitimela nsuku zonke, esilele isitimela kungaba engase bagawula kwemali esetshenziswe yokuhlala cishe ngesigamu. Kuyindlela Amazing ukuze wonge isikhathi kakhulu njengoba wena balale emzini owodwa futhi uvuke kwenye. Sengikushilo lokho, kubalulekile ukuqonda izinhlobo ezahlukene ebusuku isitimela zokulala.
The best kukhona izitimela ukuthi babe linezingxenye. Lezi zihlalo ezenziwe kungenziwa babambisana uma uthatha isitimela ukwakha embhedeni kanye ikhethini ukuze ubumfihlo. Okulandelayo kukhona couchettes, inketho eshibhe futhi obanzi kunayo. Lezi amakamelo bunks ezine kuya kweziyisithupha futhi kukhona unisex, ukuze anikele ubumfihlo bakho kancane. Inketho zokugcina futhi eqolo iyona olele. Lesi kude kube mnandi futhi yangasese, zonke izinketho zisekhona ezishibhile ehhotela.
Vienna ukuze Hanover Izitimela
Copenhagen eVienna Izitimela
Londoloza Ukudla neziphuzo futhi Thatha Isitimela
Packing ukudla zakho siqu iyona indlela eshibhe ukuya ngakho. Ngokungafani ukuhamba njalo ngebhasi noma ngemoto, uma uthatha isitimela ungakwazi empeleni udle kahle. izihlalo Iningi itafula wokudonsa noma itafula fixed phakathi izihlalo ezimbili. Nokho, uma kufanele ukuthenga ukudla yakho kanye iziphuzo phakathi kohambo lwakho, kulungile. Isidlo esitimeleni akuyona ngokweqile pricey futhi ungakwazi ngokuvamile isicelo avele akunikeze izaphulelo.
EBordeaux kuya Nantes Izitimela
Paris Nantes Izitimela
Lyon ukuba Nantes Izitimela
EMarseilles ukuba Nantes Izitimela
Ukuhlela uhambo lwakho ngesitimela ingakusiza wenze okuhle kwe-Isikhwama ikhambo lakho! Ukuthola ukuxhumana okuhle ngokuvamile kungaba ezishibhile ekubambeni indiza, futhi ukhululekile ezingaphezu kuka ehamba ngemoto. Thatha isitimela esiya engavamile surely enothisa lonke uhambo lwakho!
Thatha Isitimela ukuze Londoloza-A-zemininingwane, khetha indawo oya kuyo, futhi uthathe isitimela uye cishe noma yikuphi eYurophu ngamanani angabizi kakhulu emakethe! futhi, Qagela? Uma uthola ithikithi lakho Isitimela Londoloza Isitimela, Inqubo yokubhuka kwenziwa ngaphakathi 3 amaminithi, ngakho izikhwama zakho futhi ujabulele konke elandela!
Ingabe ufuna ukushumeka kokuthunyelwe kwebhulogi ungene kusayithi lakho, bese uchofoza lapha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftake-train-europe%2F%3Flang%3Dzu - (Skrolela phansi ukuze ubone Shumeka Ikhodi)
Uma ufuna ukuba abe nomusa kubasebenzisi bakho, ungakwazi ukuqondisa kwabo ngqo amakhasi ethu search. Kulesi isixhumanisi, uzothola imizila ethu adumile isitimela – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Ngaphakathi une izixhumanisi lwethu IsiZulu kokwehla Amakhasi, kodwa siphinde sibe https://www.saveatrain.com/de_routes_sitemap.xml futhi ungakwazi ukushintsha / de ukuba / nl noma / pl kanye ngezilimi ezingaphezu.
#ubusuku #traveleurope amathiphu isitimela sokuvakasha traveltips